Chrome tantanana 2 amin'ny fandroana fandroana Chrome
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / Miparitaka Chrome Faucet amin'ny fandroana ambony Arc 2-tanana
Miara-miparitaka amin'ny fantsom-pandehanana mahery vaika any an-trano misy milina 2 mahery
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 25 mpanjifa naoty
(25 mpanjifa famerenana)
Ny fanamafisana ny fijerinao ny efitrano fandroanao miaraka amin'ny famolavolana amin'ny antsipirihany, ny efitrano fandroana Nickel Rivotra Ninkleau dia manolotra ny hatsaranao ao amin'ny efitra fandroana.
2321300C torolàlana fametrahana
Saribao mahazatra kalitao mahazatra kalitao mahazatra: vy varahina matevina vy varahina 2321300C. Ny faran'ny Chrome dia mahatanty ny fiparitahana. Kitapo misy kapoakan-tsoavaly avo sy mpanamboatra rano tsy miankina amin'ny rano. Fitaovana avo roa heny ho an'ny mpandeha tsara sy ny mari-pana ny rano. (azafady diniho ny haben'ny fandozonao alohan'ny handidiana).
teknolojia mamorona, haingana mampitohy: fanamboarana haingana haingana haingana dia tsotra ny fametrahana amin'ny alàlan'ny tenanao nefa tsy misy mpipaika. Tehirizo ny fametrahana paompy amin'ny gripe hazo. Ny habaka dia azo ampiharina amin'ny zavatra takian'ny tena. Mifidy trano manofa trano, condominium vaovao, tokantrano tokana, trano môtô, tranofiara fitaterana entana ary fampiasana ny tokantrano.
Manaova fika roa hena ho an'ny mpandeha tsotra sy ny hafanan'ny rano. Mifidy trano manofa trano, condominium vaovao, tokantrano tokana, trano môtô, tranofiara fitaterana entana ary fampiasana ny tokantrano.
SKU: 2321300C Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: faucets mandro, miitatra be, kromo voatsangana
12.1 X 8.5 X 3.1 santimetatra
5 taona tsy nety
Nividy ity faucet ity indrindra aho satria izy io no iray amin'ireo mora indrindra amin'ny karazany misy azy, fa ny fanamorana ny fametrahana azy no antony hividianako azy indray. Rehefa avy nametraka ny fametahana izy ireo, dia nohamafisin'ny visy amin'ny volo fa tsy ny fanamafisana ny voanjo mivantana, izay manafoana ny fanaintainan'ny fiezahana mihodina lozabe lava tanana ao amin'ny efitrano tery ao ambanin'ny filentehana. Toy izany koa, ny fantsana dia tsy mila miolakolaka na manolana, fa mora mipoitra fotsiny amin'ireo fametahana.
Ny nitpicks-ko fotsiny dia tsy mora apetraka noho ny hafa ny singa mikoriana, ary ny plastikan'ny fantsom-by dia toa somary mora vidy ary mety ho zatra lany ary manapotika taona vitsivitsy any ambany, fa milamina ihany ny zava-drehetra ankehitriny . Torohevitra azo antoka izany ho an'ny fanamorana ny fametrahana azy irery.
Niverina nipoitra indray ireo tampon-kaontera ary nitady fomba ara-toekarena hitafiana ny fandroana aho. Safidy tsara ireo faucet ireo. Mora ny nametraka sy niasa tsara izy ireo. Ny vozon'akanjaka tany am-boalohany dia lehibe kokoa mba hialan'ny valaniko mba hialan'ny rano araka ny tokony ho izy. Nampandre azy ireo aho ary nandefa fanoloana kely kokoa ry zareo. Sarobidy io vokatra io ary miavaka ny serivisin'izy ireo.
Ity dia soloina faucet tsara ho an'ny vovo-fandroako. Izy io dia manana fomba madio madio. Nanantena aho fa ho somary lava kokoa ireo tahony, saingy rehefa nampiasaiko azy ireo imbetsaka aho dia toa marina ihany. Ny vadiko nametraka mora foana ny zava-drehetra. Tsy azoko antoka ny momba ny fantsom-panafody mipoitra, saingy tena tiako kokoa noho ny karazany levera taloha. Mitazona tsotra fotsiny ny zava-drehetra. Manana ny famaranana Chrome mamirapiratra aho ary tiako izany. Ny vidiny dia mora lavitra noho ny hafa nojereko. Manantena ny hankafy an'ity mandritra ny fotoana ela aho.
*** A D2020-06-07
Napetrakay tao amin'ny efitra fandroana master anay ireo andiany 2. Mihazakazaka tsara ny tahony. Mahatsapa izy ireo ary tsara tarehy. Ho avo roa heny izy ireo ao Lowes, sns.
Y f ***2020-06-10
Natolotra ara-potoana ilay faucet ary mora ny nametraka azy. Nandany fotoana bebe kokoa tamiko ny fanesorana ilay taloha fa tsy ny fametrahana ny faucet vaovao.
Ity faucet ity dia ho an'ny trano fandroana ao amin'ny efitrano fatoriana lehibe. Tena nahagaga anay ny kalitaon'ny vokatra ho an'ny pric
Ity faucet milentika ity dia vita amin'ny kalitao faran'izay avo. Mahatsiaro mavesatra toy ny anarana marika lafo vidy izy io. Tonga miaraka amin'ireo faritra ilaina amin'ny fametrahana azy. Raha nametraka nandritra ny herinandro lasa izy ary miasa tsara hatreto! Hanavao raha misy miova.
Mahafinaritra ity faucet ity! Tsara kalitao ary mandeha tsara! Ny intrustions dia somary very hevitra ihany aho fa mbola afaka nametraka azy ihany!
Tiako ity faucet ity! Tsy tsapako rehefa nandidy azy aho fa afaka mihetsiketsika ny spout, izay tena fananana mora azo!
E *** ny2020-06-19
Tiavo ny fantsom-panafody vaovao natokana ho an'ny efitrano fandroana vao nohavaozina! Tena maoderina sy malama.
Tiako ity faucet ity. Nividy roa tokoa aho ary samy milalao amin'ny trano fandroana samy hafa izy ireo. Mora sy matanjaka izy io. Mety tsara ny fantson'ny pop up ary mora ny nametraka azy. Mora ny manadio sy manintona be!
A *** ny2020-06-26
Tsy afaka mamehy ny lohako akory amin'ny vidin'ny faucet ity aho ary tsara tarehy sy kanto toa azy. Izahay dia nitady an'ireo mitovy amin'ny Home Depot sy Lowe's mihoatra ny avo roa heny amin'ny vidiny. Ity no faucet telo voalohany napetrako ary haingana be tokoa izy io. Ny ampahany sarotra indrindra dia ny fijerin'ny maso ny zava-drehetra ary alao antoka fa mifanaraka tsara ireo singa telo ireo. Miankina amin'ny halavan'ny tsipika famatsiana ampiasainao dia azonao atao ny mampifandray ireo alohan'ny hametrahana ny mafana na ny hatsiaka amin'ny toerana misy azy, alao antoka fa manana ny sombin-javatra ianao hanamafisana azy ireo. Tsy afaka milaza zavatra lehibe momba izany aho. Tena tsara sy 100% ny vidin'ny denaria tsirairay !!
Vao haingana aho no nividy & nametraka an'ity faucet ity ho ampahany amin'ny fanavaozana ny trano fidiovana. Tena faly aho tamin'ny fanapahan-kevitro hividy an'ity marika / maodely ity amin'ny olon-kafa nojereko sy nodinihiko. Ny faucet dia kanto amin'ny fisehoany, miasa tsy misy kilema ary tena tsara eritreretina amin'ny 'endriny sy ny fananganana azy. Ny tsipika fampifandraisana haingana dia tena manampy ary manamora ny fametrahana. Tsy niainako ny fivoahana na olana nandritra ny fametrahana, ary hatramin'ny nanombohako nampiasa ilay faucet. Na dia misy aza ny fantsom-panafody omena, satria ampiasaina isan'andro io trano fidiovana io dia nisafidy fantsona hafa miaraka amin'ny harona azo trandrahana haingana azo esorina aho. Mikasa ny hametraka ny pop-up omena amin'ny trano fidiovana tsy dia ampiasaina intsony aho ato ho ato.
Ireo dia tsara tarehy hita ao amin'ny trano fandroana. Nosoloinay tamin'ireto ny lalao taloha 1978 ary tsy mampino ny fahasamihafana. Mahatsiaro ho matanjaka ny tsindry, ary ny arofanina avo dia manamora ny fametrahana zavatra ao ambanin'ilay filentehana. Ny fahatsoran'ny fametrahana dia nahatonga ahy ho tia an'ireny faucet sinks ireny.
Ny Moen taloha tao anaty trano fidiovana dia nilavo lefona ary nanomboka namoaka- tsy namboarina intsony. Mila fanoloana tsy lafo. Niahiahy momba an'ity iray aho, satria ambany ny vidiny. Gaga be aho rehefa tonga. Toa tsara izany ary tsotra ny torolalana arahiny ary mora ny mametraka azy (na dia nanana zanak'ondry nitsambikina aza aho). Nahazo mailaka avy tamin'i WOWOW aza aho mba hahazoana antoka fa niasa ho ahy izany. Tena faly tamin'ny fividianana
Rehefa nanokatra ny fonosana lehibe ny eritreritro dia azo antoka fa madio, vita tsara, fifandraisana vita amin'ny varahina, nandeha mora be… rehefa avy nilaza izany fa tao anatin'ny herinandro fotsiny dia tsy nisy traikefa momba ny halavany, fa tiako hatreto
Tsy nino aho rehefa nandidy an'io noho ny vidiny. Nanafatra andiany 2 aho handroan'ny tompoko. Mahafinaritra ery!! Tsara sy matanjaka izy ireo. Tena nahagaga ny mpamatsy ahy. Hatramin'izao dia tena manoro hevitra tokoa aho!
Natao hisolo faucet fandroana taloha io. Tsy nanantena fampitaovana tsara tarehy toy izany aho! Nahafinaritra ny vidiny, ka faly aho. Rivotra ny fametrahana. Tsy nandany fotoana akory ny fametahana azy io. Nandany fotoana bebe kokoa ny fanesorana ilay taloha. Fividianana tsara ity!
Mahafinaritra ans mora apetraka. Tiako ny kisary ao amin'ny famaritana ny vokatra, izay manome ahy ny fahatokisana fa hifanaraka amin'ny fantson-drano efa misy ao amin'ny trano fidiako. Ary miasa araka ny nampoizina. Tonga lafatra ny fomba fijery ankapobeny.
Nividy ity faucet fandroana ity izahay fa tsy Moen na Delta noho ny tsy fitovian'ny vidiny ary tsara hatreto. Izy io dia faucet tena tsara tarehy ary efa niasa tsara hatreto.
M *** f2020-07-23
Tena talanjona amin'ny kalitao sy ny faran'ity faucet ity. Tsara raha tsy tsara kokoa noho ny marika be marika sy mora vidy kokoa.
H *** ny2020-07-26
Nividy ity faucet ity ho solony. Mora apetraka. Manana endrika maoderina tsara. Mora diovina. Ny faritra ao anatiny dia varahina. Tiavo ny tatatra mipoitra. Nilaza ny vadiko fa tsara kokoa noho ny faucet lafo vidy nataonay io.
Nametraka faucet roa tao anaty adiny iray. Tena tsara tarehy izy ireo. Tiavo ny bokotra fanakanana tafiditra ao ary ny tsipika famatsian-drano. Hatreto ity vokatra ity dia sanda tsara amin'ny volanao
Tiavo ny fijerin'ireto! Mahatonga ny trano fandroana ho kanto. Mora tokoa ny mametraka azy ary manana endrika banjinina mahatonga azy ireo ho madio diovina. Fandidiana tena malama sy fikorianan'ny rano be.
Fanatsarana lehibe noho ny fanomanana ankehitriny izay novidina tao an-trano. Ny fandaminana taloha dia mitentina $ 120 amin'ny trano ambany / trano fitahirizana trano. Ity maodely ity dia mamela ny fikorianan'ny rano tsara kokoa, ny singa vaovao ary ny fametrahana mora amin'ny vidiny mirary. Toa tsara ny kalitao!
Faucet Chrome an'ny efitra fandroana efitra fandroana WOWOW
Matt Black Tall Basin mixer Tap